किन पुग्यो मन्त्रीसहितको टोली एकाविहानै कालिमाटी र बल्खु ? - कृषि डेली
Home banner किन पुग्यो मन्त्रीसहितको टोली एकाविहानै कालिमाटी र बल्खु ?
किन पुग्यो मन्त्रीसहितको टोली एकाविहानै कालिमाटी र बल्खु ?
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य अस्वभाविकरूपमा वृद्धि भएको जनगुनासो आएसँगै कालीमाटी र बल्खुस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारको अनुगमन गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृतको नेतृत्वमा आज बिहानै ४ बजेदेखि उक्त तरकारी बजारको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनका लागि दुई टोली खटिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिनुभयो ।
Previous articlePractical Programs For Russian Brides Across The Usa
Next articleSelecting Simple Systems In RussiansBrides